Khabar Kantipur » धुर्मुस-सुन्तलीले बनाइरहेको क्रिकेट रंगशालामा जिप सफारी चढेर रंगशाला भिजिट गर्दै ! पर्यटन हरु
धुर्मुस-सुन्तलीले बनाइरहेको क्रिकेट रंगशालामा जिप सफारी चढेर रंगशाला भिजिट गर्दै ! पर्यटन हरु
भरतपुरमहानगरपालिकाको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्त र्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण भइरहेको छ एक सयभन्दा बढी कामदार निर्माणको काममा खटेका छन्। चर्चित हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुन्जना घिमिरे सुन्तली’ को अगुवाइमा बन्दै गरेको रंगशालाको मुख्य मै दान र प्याराफिट बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ।
क्रिकेटको विकासका लागि देशकै म’हत्वपूर्ण संरचना बन्दै गर्दा सर्वसाधारणको पनि यसप्रति चासो निकै बढेको छ। निर्माणाधीन रंगशाला हेर्न दिनहुँ सयौं मान्छे यहाँ आइ पुग्छन् । उनीहरू तोकिएको शुल्क बुझाएर रंगशालाको अवलोकन गर्छन्। रंगशालाको अवलोकनका लागि जिप सफारीको व्यवस्था गरिएको छ।
काउन्टरबाट २ सय रुपैयाँको टिकट लिएपछि जिप चढेर रंगशालामा भइरहेको कामको अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिप नचढ्नेले भ्यू टावरबाट पनि निर्माणाधीन रंगशालाको अवलोकन गर्न सक्छन् धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले रंगशाला को आ’र्थिक स्रोत बढाउने अभिप्रायले जिप सफारीको व्यवस्था गरिएको बताए।
उनका अनुसार गत माघ१३देखि रंगशालामा जिप सफारी सञ्चालन गरिएको हो। त्यसयता १२ हजार ५०० भन्दा बढीले जिप सफारी गरेका छन्। बाराका होटल व्यवसायी मोहन शर्मा लामिछानेले सफारीका लागि जिप उ’पलब्ध गराइदिएका थिए । उक्त जिपले नधान्दा सौराहाबाट थप जिप मगाउने गरिएको छ।
रंगशालाका लेखा प्र’मुख मुक्ति तिमिल्सिनाका अनुसार जिप सफारीबाट अहिलेसम्म २५ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। रंगशालाको अवलोकनका लागि दैनिक १ हजार ५०० जनासम्म पुग्ने गरेका छन्।‘उनीहरू कोही जिप सफारी गर्छन्, कोही भ्यू टावर चढेर अवलोकन गर्छ न्। रंगशाला पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको छ,’ कट्टेलले भने, ‘क्रिकेट रंगशालाले खेलकुदको विकासमा मात्रै नभई चितवनमा खेल पर्यटनको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमि का खेल्ने देखिन्छ।’
गत शनिबार मात्रै करिब ५०० जनाले जिप सफारीमार्फत् निर्माणधीन रंगशालाको अवलोकन गरेका थिए । जिप सफारी गर्न चाहनेका लागि एक जना गाइडको व्य’वस्था मिलाइएको छ । गाइडले रंगशालामा हाल बन्दै गरेको संरचनाको बारेमा जानकारी दिन्छन्। नमूना मैदान अवलो कनका लागि आउनेको संख्या अझै बढी हुन्छ। अवलोकन का लागि आउनेले रंगशाला नि’र्माणका लागि सकेको सहयोग गर्ने गरेको कट्टेलले बताए।
रंगशालाको अवलोकन गर्नेको संख्या पर्यटकीय नगरी सौ राहाको जस्तै देखिन्छ। शुक्रबार, शनिबार र बिदाको दिन मा उ’पस्थिति बढी हुन्छ। घुम्नका लागि चितवन आउने पर्यटकले एउटा गन्तव्य रंगशालालाई पनि बनाउन थालेका छन्, कतिपय त यहीँका लागि मात्रै भनेर आउँछन्,’ उनले भने, ‘दर्शकको उपस्थितिले काममा जाँगर थपेको छ।’
कट्टेलले रंगशाला निर्माणमा आर्थिक स्रोत जुटाउन मेची-महाकाली अभियान पनि चलाइरहेका छन्। यसै अभिया नअन्तर्गत उनले चितवनदेखि कैलालीसम्म पुगेर आ’र्थिक संकलन गरेका थिए। यसबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको उनले बताए ।अब छिट्टै अन्य जिल्ला पनि पुग्ने तयारी उनको छ।
‘७७ वटै जिल्लाको माटो ल्याएर रंगशालामा राख्ने योजना हाम्रो छ। यहाँ ७७ वटै जिल्लाको प्र’तिनिधित्व गर्ने कक्ष पनि बन्दैछन्,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँका जनताको सहयोग मा उहाँहरूले अपनत्व महसुस गर्नेगरी रंगशाला निर्माणको काम हुनेछ।रंगशाला निर्माणका लागि हालसम्म ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार ५२६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा आम्दानी ३३ करोड ४५ लाख ८ हजार ८९१ रुपैयाँमात्रै छ।
विभिन्न स्थानीय तह, निजी संस्था तथा व्यक्तिबाट बोलक बोल गरिएको रकम समयमै संकलन हुन नसक्दा रंगशाला निर्माणमा समस्या आइरहेको कट्टेल बताउँछन्। उक्त रकम संकलन गर्ने र नयाँ सहयोग जुटाउने काम सँगसँगै भइरहे को छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक रकम जुटाउँदै समयमै रंग शाला निर्माण गर्ने लक्ष्यमै हामी केन्द्रित छौं।’ setopati
प्रकाशित मिति April 13, 2021